Ireo Seranam-piaramanidina, Trano, Orinasa, Fanaovana Fanatanjahantena, Lapa Ary Fotodrafitrasa Maro Potiky Ny Ady Ao Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2015 2:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Deutsch, English
Ny 20 Aprily, nampihozongozona an'i Sanaa renivohitra ilay fanafihana an'habakabaka lehibe indrindra voatatitra. Tamin'ny Twitter, mizara io sary io i @ammar82, avy any amin'ilay toerana nisy ny fipoahana, tany amin'ny faritra misy toeram-ponenana. Namoizana ain'olona am-polony ary naratra an-jatony ilay daroka baomba
Iray volana izay ny hery miara-dian'ny Arabo no nanao zera baomba an'habakabaka tany Yemen. Tsy mifantoka manokana amin'ny faritra miaramila fotsiny intsony na ny tena tanjona fototr'izy ireo,dia ny Houthisizay naka ny fifehezana an'i Sana'a renivohitr'i Yemen tamin'ny filoha Abd-Rabbu Mansour Hadi tamin'ny Janoary.
Nisy faharavàna goavana ihany koa tany amin'ilay tanàna mahafinaritra any an-tseranan'i Aden, izay toerana amaharan'ireo Houthis miara-dàlana amin'ireo tafika manohana ny filoha taloha tao Yemen, Ali Abdulla Saleh.
Niala tamin'ny naha-filoha azy i Saleh taorian'ny telopolo taona naha-teo amin'ny fitondràna azy, taorian'ireo fihetseham-bahoaka tamin'ny 2011, ary namindra ny fahefana ho an'i Hadi taorian'ny marimaritra iraisana nokarakarain'ny GCC (Filankevitry ny Fiarahamiasa Ao amin'ny Helodrano) notarihan'i Arabia Saodita. Io firenena io ihany ankehitriny no mandaroka baomba an'i Yemen. Mbola i Saleh no mifehy ny ankamaroan'ireo vondron-tafika sy mahatahiry ny maha-tò teny azy ao amin'io firenena Arabo mahantra indrindra eto an-tany io.
Vakio koa ny: “Mandeha Manavatsava Ny Fahafatesana Izahay” , Hoy Ny Sioka Avy Amin'ny Bilaogera Yemenita Amin'ny Ady Ao Amin'ny Firenena
Mamintina ilay fahapotehana lehibe ny tatitry ny Kaomisera Ambony ho an'ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana (OHCHR), nalefa ny 17 Aprily:
Noho ilay ady dia potika, simba ary tapatapaka ireo foto-drafitrasam-bahoaka ka farafahakeliny tafiditra ao anatin'izany ny hopitaly miisa dimy (Sana’a, Al Dhale’e ary Aden), fianarana ary toerana fanabeazana 15 (Aden, Al Dhale’e, ary Sana’a), ireo seranam-piaramanidina nasiônaly telo lehibe (Sana’a, Aden ary Hudaydah), ary farafahakeliny tetezana roa, ozinina roa ary maoske efatra any Al Dhale’e. Nahazoana tatitra ihany koa ny fahasimban'ireo tsena any an-toerana, toeram-pamokarana herinaratra, ary foto-drafitrasa (WASH) momba ny rano, ny fivoahana sy ny fahadiovana any Aden, Hajjah ary Sa’ada. Nisy fiantraikany mivantana tamin'ireo tranon'olon-tsotra manokana, indrindra ny tany atsimo ireo fanafihana an'habakabaka sy ireo fifandonan'ny miaramila ireo .
Nanambara omaly (21 Aprily) i Arabia Saodita, mitarika ny hetsika miaramila amin'ny ady ao Yemen, fa nofaranany ny Hetsika Tafiotra Tsy Iadiankevitra, taorian'ny nahatratrarany ny tanjony, ary manomboka ny Hetsika Famerenana ny Fanantenana izy izao, izay manana tanjona ny hitady vahaolana ara-politika ao amin'ilay firenena izay nodarohany baomba nandritra ny efatra herinandro. Mitotaly 944 ny maty ary 3.487 ny naratra tamin'ny fifandonana tany Yemen hatry ny nanombohan'i Arabia Saodita ny hetsika miaramilany ny 26 Martsa.
Vakio koa (amin'ny teny Anglisy) ny : Electricity, Food and Fuel Shortages Increase Suffering of Yemenis as Saudi-Coalition Bombs Continue to Fall
Mampiseho ny fahapotehana goavana sy fahasimbana vokatry ny fanafihana an'habakabaka Hetsika Tafiotra Tsy Iadiankevitra nataon'i Arabia Saodita ary notohanan'i Etazonia ny ankamaroan'ireto saripika sy lahatsary mahavalalanina ireto, raha toa ka avy tamin'ireo zera baomban'ny fiara mifono vy an'ny Houthi/Saleh ny sasany:
Nizara ireo vaovao sy sarin'ilay fahapotehana goavana manerana ireo tanànan'i Yemen, vokatr'ilay ady, ireo filazam-baovao sy ireo mpampiasa Twitter hafa.
Simban'ilay fifandonana ny Firenena Mikambana, foto-drafitrasam-bahoaka, tafiditra amin'izany ireo sekoly, toeram-pahasalamana, tsena, toby famokarana herinaratra ary fitobian'entana.
fiaramanidiana MEG29 roa potika tao amin'ny Seranam-piaramanidin'i Sanaa, nandritry ny iray tamin'ireo fanafihana an'habakabaka #KSA. #Yemen
Sarin'ny fahasimbana tao amin'ny Seranam-piaramanidin'i #Hodeidah, lasibatry ny hetsika #DecisiveStorm halina. #Yemen
Nikendry ny Seranam-piaramanidina vaovaon'i Saada , #Yemen avaratra ny hetsika #DecisiveStorm. Nanomboka ny hetsiny izy tamin'ity volana ity.
Sary avy any #Aden, toerana anohizan'ireo tafika Houthi/Saleh ny fanaovana lasibatra ireo faritry ny toeram-ponenana. #Yemen #DecisiveStorm
Lehilahy iray mipetraka eo amin'ny sisan'ny tranony simba ao Aden, Yemen (avy tamin'i @ORHamilton) (Sary avy tamin'i Saleh Bahales)
Lehilahy iray mijery ny tranony simban'ny fanafihana an'habakabaky ny #Saodiàna, Talata 31 Martsa, manaikaky ny Seranam-piaramanidin'i #Sanaa #Yemen
Ito ny efitra fandrian'ny namako Madih, nialoha sy taorian'ny fanafihan'ny #Houthies tao #Aden #yemen
Loharano teo an-toerana: maherin'ny 16 ireo toeram-pitsinjaràna solika, any #Saadah #Yemen nokendren'ireo kapoka an'habakabaka #OpDecisiveStorm,
Omaly, nikendry ny siniben-drano fototra, ireo toby mpamatsy herinaratra ary ny hany toby mpanome entona fahandroana sakafo tao an-tanànan'i Sa'daa any avaratra ireo fanafihana an'habakabaka. Hoy ny nambaran'ireo mponina teny an-toerana
Ozinina mpanodina lafarinina sy fitoeram-bary lehibe indrindra any Aden: 5.500 taonina/isan'andro. Mahavita manodina hatramin'ny 170.000 taonina. Mpamatsy an'i #Yemen manontolo. Mirehitra.
Lahatsarin'ny fahasimbàn'ny Lapam-Bahoaka tao #Taiz, akaikin'ny kôlejiko. Marika iray mampirehareha io.
Ireo sary akaikikaiky kokoa an'ny Lapam-Bahoaka potika tao #Taiz. Lapa namboarin'ny filoha be mpitia indrindra, AlHamdi, io lapa io. #Yemen
Ohatra amin'ireo fahasimbàna ao an-tanànan'i Aden, izay eo ambany fanafihana mafy tsy ankijanona avy amin'ireo hery Houthi/Saleh. #Yemen
Potik'ireo fanafihana an'habakabaky ny Saodiàna ireo toeram-pitobian'ny varim-bazaha sy ozinina Radfan Tobacco any Aden. Tena manampy an'i #Yemen tokoa izy ireo
Namotika ny hotely raitra tao #aden #Yemen #KefayaWar, ireo fanafihana an'habakabaka
Ankehitriny, voazera baomba ireo tranobe amin'ny làlana Al-Mualla any #Aden. #Yemen #Houthis #DecisiveStorm
Fahapotehana any #Saada, taorian'ny nanjeran'ny #OpDecisiveStorm baomba ireo trano & toerana tsy an'ny miaramila, maty ihany koa ireo olona tsy manan-tsiny #Yemen
Fiara mifono vy an'ny Houthi mamotika tranobe amin'ny toeram-ponenana iray ao Mualla, #Aden.
Fanafihana an'habakabaka #Saodita enina tao Haradth, tanàna fiampitàna ny sisintaniy. Olona eniina maty…olon-tsotra daholo izy rehetra. #Yemen
Fahapotehana ao afovoan'i Sanaa. Fanafihana an'habakabaky ny #Saodiana mikendry tranobe amin'ny toeram-ponenana any Jiraf, distrikan'ny renivohitr'i #Yemen.
Vao nahavita nanorina ny toerana fiompiany any Hajja ny namako. Main'ireo lelafon'ny Saodiana. Nandà ny fifandraisana amin'ny Houthi izy
Vao 5 taona lasa izay, nampiantrano ny fetim-panokafana ny Fiadiana izay ho tompondakan'ny #Golfa i Yemen #Aden, tao amin'ny Kianjan'ny 22 May. Ankehitriny rava nizara roa #KefayaWar
Ity no “Ibb” Kianjan'ny #Baolina kitra nahazatra talohan'ny fanafihana an'habakabaky ny #Saodiàna…. Simba tanteraka. #Yemen
Farahafakeliny olona 29 no maty halina, raha nanafika ozinina fanamboarana Ronono sy “Yaourt” tao Hodieda ny Saodiàna. #Yemen
Sekoly Ambaratonga fototra, lasibatry ny fanafihana an'habakaba Saodiàna tao Sahar, faritanin'i Saadah. #Yemen #OpDecisiveStorm
#Anjerimanontolon'i Hodeida taorian'ny fanafihana an'habakabaky ny #Saodiàna. Tsy nisy mpianatra tao anatiny satria nakatona noho ny ady ireo sekoly. #Yemen
Tetezana mampifandray an'i Taiz amin'ny faritanin'i Lahj…. Simban'ny fanafihana an'habakabaka #Saodiàna. #Yemen #OpDecisiveStorm
Nampihontsokontsona ny renivohitra Sanaa, ny 20 Aprily, ny fanafihana an'habakabaka lehibe indrindra voatatitra. Nikendry ny toby fametrahna fitaovam-piadiana tao Faj Attan, izay anaty faritra misy teram-ponenana io, ary nahatonga fahafatesan'olona am-polony sy faharatràna an-jatony, miaraka amin'ny fahapotehan'ireo trano fonenana, ilay fipoahana mahery vaika.
Tsy fitandremanamanao ahoana moa ny fandatsahana baomba mahery vaika amin'ny tanàna feno mponina??? #OpDecisiveStorm
Sary mazava tsara an'ilay fipoahana mahery vaika tao Faj-Attan omaly, izay nanimba tanteraka ny tanàna manodidina rehetra #Yemen
Ny renin'ireo fipoahana rehetra. Potika ny tranoko .
simba daholo ilay tranobe misy rihana dimy nitoeranay, ary nivoaka niaraka tamin'ny rà mitete amin'ireo vatany ireo olona mipetraka manodidina anay #Yemen
Ohatra an'izao ny fampandehandehanana alika aty amin'ny toerana manodidina ahy androany. Tohin'ny zera baomba tany Faj Attan. Misy fizakàmanana.
Vaky ny varavaram-pitaratry ny Anjerimanontolon'i #Sanaa, Fianarana ambony momba ny varotra. Any amin'ny 15 kilômetatry ny toerana nisy ilay fipoahana androany io. #Yemen
Sarin'ny fanafihana an'habakabaka #OpDecisiveStorm namely ny tetezan'i Al-Daleel, any amin'ny faran'ny Làlana Sumarah any Ibb.
Ny “Operation Decisive storm” ary ireo fanafihana an'habakabaka nentiny, ny fitohizan'ny ady ataon'ny milisy Houthi sy Saleh any Taiz, Mareb ary ireo fitondràna any atsimo dia niteraka fahafatesana sy faharavàna nanerana an'i Yemen, ary olona tsy manan-tsiny maro voafandrika tao anatin'ny fifampitifirana.
Vakio koa ny (amin'ny teny Anglisy): GV Tracking the Destruction of Infrastructure in Yemen
Manontany tena ny amin'izay hoentin'ny Hetsika Femerenana Fanantenàna ny olona?!
Nandefa bitsika toy izao i Ruba Aleryani: